ပရိုတင်း နဲ့ ကိုယ်ခံအား - Page 18 of 52 - Hello Sayarwon
ပရိုတင်း နဲ့ ကိုယ်ခံအား
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 12/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရောဂါတွေ ပိုမိုဆန်းပြားလာတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းမှလည်း ရောဂါတွေကူးစက်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံး တိုက်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်လေး တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးပါရစေ။
ပရိုတင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာလုပ်ပေးလဲ……….
အသားဓာတ်လို့ သိထားကြတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ရှူးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ နဲ့ ပြုပြင်ပေးရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အဓိက ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အာဟာရဓာတ်ပါ။
ပရိုတင်းက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တိုင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်ခုပါ။ ဆံပင်တွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမွေးအမျှင်တွေနဲ့ လက်သည်းခြေသည်းတွေကို ပရိုတင်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ပရိုတင်းကို တစ်ရှူးတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ပြုပြင်ရာမှာ အသုံးပြုသလို အင်ဇိုင်းတွေ၊ ဟော်မုန်းတွေ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အခြားဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့လည်း ပရိုတင်းကိုပဲ သုံးပါတယ်။
ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နှလုံး ကျန်းမာရေးကစလို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လည်း တာဝန်ယူ ပေးပါသေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေ၊ အရိုး နဲ့ ကြွက်သား၊ အရေပြား နဲ့ အရိုးနုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့လည်း ပရိုတင်းက အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အကောင်းဆုံးလည်ပတ်စေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ လောင်စာပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က ခန္ဓာကိုယ်က ပရိုတင်းကို မသိုလှောင်ထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာနေစေဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ်တိုင်းမှာ အသစ်အသစ်သော ပရိုတင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာပါ။
ကိုယ်ခံအားစနစ်မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆဲလ်တွေ အမြှေးပါးတွေ ကျန်းမာနေစေဖို့လည်း ပရိုတင်းကပဲ အားဖြည့်ပေးထားတာပါ။ ဒီတော့ ရောဂါတွေ ထူပြောလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ဆိုရင် မဖြစ်မနေ နေ့စဉ် ပရိုတင်းပါအောင် စားသုံးပေးဖို့လို ပါမယ်။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေမှာပါ။
ခဏခဏ ဖျားနာလွယ်မယ်စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာမှာ ပရိုတင်းဘယ်လောက် စားသင့်လဲ…………..
တော်တော်များများ ကြားမိထားနိုင်တဲ့ အယူအဆအမှားတစ်ခုက ပရိုတင်းများများစားရင် ကြွက်သားတွေတက်လာ နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ တကယ်ကတော့ ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း များများလုပ်ပေးတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ဆိုရင် ပရိုတင်း လုံလောက်မျှတတဲ့ ပမာဏ ရရှိဖို့လိုပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိုတင်းများလို့ အင်အားတွေ ပိုများလာမယ် ကြွက်သားတွေ ပိုသန်မာလာမယ်ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အသက်အရွယ်အလိုက် ပရိုတင်း လိုအပ်ချက်ကတော့ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
အသက် ၂ နှစ် ကနေ ၆ နှစ်အတွင်း ကလေးငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အနေနဲ့ကတော့ တစ်နေ့ကို ၅ အောင်စလောက် စားသုံးပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေကတော့ တစ်နေ့ကို ပရိုတင်း ၆ အောင်စလောက် စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက ဘာတွေများလဲ………..
ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကများပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ပရိုတင်းကို ရဖို့ဆိုရင်တော့
အာလူး စတာတွေကို နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ သင့်တင့်မျှတစွာ ထည့်သွင်းစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
Are high-protein foods good for the immune system? https://www.webmd.com/cold-and-flu/qa/are-highprotein-foods-good-for-the-immune-system Accessed Date 8 April 2020
The Benefits of Protein https://www.webmd.com/men/features/benefits-protein#4 Accessed Date 8 April 2020
9 Important Functions of Protein in Your Body https://www.healthline.com/nutrition/functions-of-protein Accessed Date 8 April 2020
ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ သတ်သတ်လွတ် အစားအစာတွေ
ပရိုတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားနိုင်တဲ့ လွဲလွဲလေးများ
ပရိုတင်း နဲ့ အရိုးကျန်းမာရေး